Maxkamadaha Sweden oo ka horyimid in EU yeelato xeer magangeliyo oo isku mid ah - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Maxkamadaha Sweden oo ka horyimid in EU yeelato xeer magangeliyo oo isku mid ah
La daabacay tisdag 1 november 2016 kl 10.56
Awood badan inta laga wareejiyo dowladaha ayaa loo gacangelinaya EU
Maxkamadaha socdaalka oo ka horyimid hindise EU ka yimid oo ah waddamada yeeshaan xeer magangeliyo oo isku mid ah. sawir: Johan Nilsson/TT, Henrik Montgomery/TT
Kommishinka EU ayaa doonaya in waddamada ku bahoobay ururkan ay yeeshaan xeerar magangeliyo oo isku mid ah.
Kommishinka EU ayaa doonaya in waddamada ku bahoobay ururkan ay yeeshaan xeerar magangeliyo oo isku mid ah. Laakiin maxkamadaha socdaalka dalkan Sweden ayaa guud ahaan arrintan ka soo horjeedsaday. Xeerar manageliyo isku mid ah oo EU yeelato waxay wiiqeysaa xaquuqda magangeliyada, maxkamadaha Sweden awoodooda waxaa la wareegeysa EU, ayaa lagu yeri jawab celin ay arrintan ka dhiibteen maxkmadaha socdaalka dalkan Sweden.
– Awood badan ayaa inta laga wareejiyo dowladaha qaranka loo gacan-gelinayaa kommishinka EU iyo hey’adaha hoos yimaada, ayey tiri Ulrika Geijer oo ah garsoore madax ka ah maxkamadda maamulka magaalada Malmö.
Tusaale ka mid ah isbaddelka ay EU dooneyso in ay meelmariso waxuu yahy in EU ay go’aamiso waddamada ah amaan ee dib loogu celin karo magangeliyo doonka halka ay hadda dowladaha taa iyaga go’aamiyaan. EU ayaa dooneyso in horey laga celiyo magangeliyo doonka ka soo jeeda ama soo maray waddan nabadgeliyo ka jirto iyadoo habo-yaraatee la tijaabin kiiskiisa magangeliyo doon. Taasna waxay ka micno tahay in ay awoodda weynayaan maxkamadaha Sweden haddii komminshinka EU sida uu doonayo la meelmariyo ayey tiri Ulrika Geijer.
– Ma jiri doonto si loo baalmari karo xeerkan haddii la hirgeliyo balse waxay noqoneysaa in la raaco, waddamada xubnaha ka ah EU iyo maxkamadahooda way ku qasbanaanayaan in xeerka sidiisa u fuliyaan.
Sharuucda Sweden waxaa aas’aasi u ah in shaqsi welibo uu helo tijaabo sharci oo u gaar ah iyo in maxkamadu ay iyada qiimeyso xaqiiqda kiiska lo horkeenay. Hindisaha EU ee ah in waddamada xubnaha ka ah ururka ay yeeshaan xeerar magangeliyo oo isku mid ah toos waxuu uga horimaanayaa gundhiga sharuucda Sweden, sidas waxaa aaminsan John Panofsky oo ka howl-gala maxkamdda socdaalka magaalada Göteborg.
– Caadiyan kiiska maxkamadda la hor keeno waxay tahay in la qiimeeyo iyadoo la raacayo mabda’ ah qiimeyn cadeymo oo xor ah balse ma ahan in aan lugta uga xirnaano qiimeyn horey loo dejiyey, ayuu yeri John Panofsky.
Arrin kale la hadlayo ayaa ah in Sweden waqti dheer xeerarkeeda magangeliyo uu aahaa mid deeqsi ah marka loo barbardhigo xeerarka magangeliyo ee waddamada kale ee EU. Sweden maanta waxaa ka jira xeer magangeliyo oo adag balse ku meel gaar ah.
Waxay se u muuqataa sida lagu sheegay ka baaraandegid lagu sameeyey hindisah EU ee ah in waddamada ay yeeshaan xeer isku mid ah in ay ka micno noqon doonto xeerkan adag ee magangeliyo ee Sweden uu ahaan doono mid rasmi laga dhigo. Taas micnaheeda tahay magangeliyo doonka sharciga laga siiyo Sweden uu ahaan doono ku meel gaar keliya.
Haddii sida ay doneyso EU la hirgeliyo waxay meel ka dhac weyn ku tahay xaquuqda qofka ee ah in uu xaq u leeyahay magangeliyo in uu dalbado, ayey aaminsan yahiin maxkmadaha socdaalka Sweden. Dad badan na aysan xaq u yeelan doonin in kiiskooda magangeliyo loo tijaabiyo, taas keeni karto natiijo aan loo baahneyn, ayey tiri Ulrika Geijer oo ah garsoore madax ka ah maxkamadda maamulka magaalada Malmö.